Site na Reddit & Quora: Ajụjụ 12 (arụmụka kpụ ọkụ n'ọnụ) gbasara NMN - AASraw
/blog/gallery/Site na Reddit & Quora: Ajụjụ 12 (arụmụka kpụ ọkụ n'ọnụ) gbasara NMN
Ihe na 08 / 19 / 2021 by Mmmmmmmmmmmm dere na gallery.
Kedu ihe bụ NMN ntụ ntụ?
Kedu ihe NAD+ nwere gbasara NMN?
NMN Powder Safe Mgbakwunye?
Uru dị a Canaa ka NMN ntụ ntụ ga -ewetara ahụ m?
Enwere m ike nweta NMN zuru oke site na nri ruo mgbochi ịka nká?
Kedu otu esi ewere ntụ ntụ NMN?
Ọ kwesịrị ka m were NMN gbakwunye mgbakwunye ndị ọzọ?
NMN ọ dị mma maka COVID-2019?
NMN VS. NR: Kedu nke ka mma?
Kedu otu m ga -esi chọta ntụ ntụ NMN kacha mma?
Kedu otu esi echekwa NMN ntụ ntụ?
Enwere ezigbo nyocha na ntụ ntụ NMN?
Dịka anyị niile mara, ngwaahịa ịka nka bụ isiokwu na-adịgide adịgide na ọtụtụ mmadụ na-amụ ubi a ogologo oge, Na 2018, enwere ọgwụ ọhụrụ maka ịka nká na ọ kpatara agụụ na ngwaahịa ịka nká, ngwaahịa ọhụrụ a akpọrọ " NMN ”. NMN (β-Nicotinamide Mononucleotide) dị ka ụdị mgbakwunye mgbochi ịka nká bụ ihe ama ama. Inweta mgbakwunye NMN ma ọ bụ ịgbakwunye ụfọdụ ntụ ọka NMN n'ime nri ụtụtụ bụ ihe a na -ahụkarị kemgbe 2020. Kedu ozi anyị kwesịrị ịma gbasara NMN na otu esi azụta ntụ ntụ NMN n'ịntanetị, ajụjụ niile na -emetụta ọtụtụ ndị dị njikere iji ntụ ntụ NMN ma ọ bụ mgbakwunye. Taa, anyị anakọtara isiokwu a na -ekwukarị na ntanetị site na reddit na quora na NMN, nwee olile anya na azịza ndị a nwere ike inyere gị aka ịmata NMN wee zụta ezigbo ntụ ntụ NMN n'ịntanetị.
NMN dị mkpụmkpụ maka nicotinamide mononucleotide (CAS: 1094-61-7), molekul na-emekarị na ụdị niile. Na ọkwa molekụla, ọ bụ ribonucleotide, ihe bụ ntọala nke nucleic acid RNA. Na ụdị ọ mejupụtara otu nicotinamide, ribose na otu phosphate. NMN bụ ihe na -emepụta vitamin B3 (niacin). Ọ na -adịkarị ma enwere ike ịme ya site na isi nri dị ka mkpụrụ osisi, mmiri ara ehi, na akwụkwọ nri. N'ime ahụ, a na -eji NMN emepụta nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+), molekul siri ike ma dịkwa mkpa nke dị na sel niile nke ahụ. Yabụ, Iwere ntụ ntụ NMN bụ otu ụzọ enwere ike isi mụbaa ọkwa NAD+ na sel, wee mezuo ebumnuche nke ịka nká.
Maka ugbu a, enwere ọtụtụ ụzọ esi emepụta akụrụngwa NMN n'ụlọ ọrụ, nke a na -akpọkwa NMN ntụ ntụ. Dị ka m maara, amaara m ụzọ 2 site na ụlọ ọrụ na -emepụta ntụ ntụ NMN:
Usoro 1 maka imepụta ntụ ntụ NMN: Usoro mkpali (ọkwa ọkwa)
Ngwaahịa emepụtara naanị maka mmeghachi mmeghachi kemịkalụ Industrial, adabaghị na mmadụ, ọ gaghị adị ha mkpa ịchọpụta nnukwu ọla, ihe na -egosi microbiological n'ime ntụ, ọ dị ize ndụ.
Usoro 2 maka imepụta ntụ ntụ NMN: Usoro enzyme (ọkwa nri)
Site na usoro a, ntụ ntụ NMN dị mma maka ndị mmadụ na -eji, ọ nweghịkwa ihe fọdụrụ Reagent, ọbụlagodi jiri usoro ọkọlọtọ mpụga nwalee ogo ya, nsonaazụ ya adịchaghị 98% ịdị ọcha. (enwere ụfọdụ ngwaahịa dị ncha na -eme ka nne mmiri mmiri nweta ntụ ntụ, ma jiri usoro HPLC nwalee ịdị ọcha, ọ dịkwa ihe na -erughị 98%, mana mgbe ọ na -eji usoro ọkọlọtọ mpụga tụọ, mgbe ahụ ihe dị iche ga -apụta ìhè .
AASraw bụ ụlọ ọrụ na -emepụta ihe iji mepụta ntụ ntụ NMN na China na kedu usoro anyị jiri bụ usoro enzymatic, a ga -anwale ntụ ntụ NMN ọ bụla tupu ere ya yana ịdị ọcha na -egosi 99% min, ịdị mma ya kwụsiri ike. Anyị emeela nkwekọrịta na ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ mgbakwunye ma nye ha ntụ ntụ NMN ogologo oge. Obi abụọ adịghị ya na ụzọ Enzymatic bụ ezigbo nhọrọ maka ọtụtụ ụlọ nrụpụta. Yabụ, biko gosi nke a n'aka onye na -ebunye gị ntụ ntụ NMN n'ihu gị zụta NMN nnukwu uzuzu.
NAD na -anọchite anya nicotinamide adenine dinucleotide. Site na nje bacteria ruo na ụmụ anụmanụ, ọ bụ otu n'ime ihe ndị dị oke mkpa ma dịkwa mkpa na metabolism cellular. N'ụzọ ọzọ, ahụ niile nwere ihe NAD, anyị nwere ike ịnwụ na sekọnd 30 na -enweghị ọnụnọ NAD+. Nke ahụ na -agwa anyị NAD+ bụ ihe dị ezigbo mkpa maka ahụ anyị, ọ nwere ike kwado ọrụ ahụ anyị ka ọ na -adị kwa ụbọchị.
NAD+ na -arụ ọrụ dị ka ụgbọ ala na -ebufe, na -ebugharị elektrọn gafere otu molecule cellular ọzọ.Ọ na -enyere aka ịgbanye nri ka ọ bụrụ ike dị ka onye isi na metabolism na ịrụ ọrụ dị ka ihe enyemaka molecule maka protein ndị na -ahazi ọrụ cellular ndị ọzọ. Usoro ndị a dị oke mkpa. Ọrụ ndị ọzọ nke NAD+ gụnyere ịhazi usoro ụra/iteta. NAD+ na -anya sirtuins ka ọ na -ahazi metabolism ma na -ejigide kromosome kwụsiri ike. Molekule na -enyekwa aka n'ịrụzi DNA mebiri emebi.
Yabụ, ọ dị ezigbo mkpa idobe ọkwa NAD+ nke ahụ anyị. Nke ahụ gwakwara anyị na anyị na -eto eto site na ịbawanye ọkwa NAD+, nyere anyị aka ịlụ ọgụ ịka nká. Yabụ kedu ihe anyị kwesịrị ịbawanye ọkwa NAD+ anyị?
Dị ka ndị sayensị kwuru, enwere ụzọ atọ iji bulie ọkwa NAD+:
Gbanwee usoro nri. Nri nwere abụba na obere carbohydrates, dị ka keto ma ọ bụ ụdị nri Atkins, na-akwalite steeti ketosis. Mgbe ahụ gị nọ na ketosis, ị na -eji abụba maka ike kama glucose. Usoro a na -abawanye oke nke NAD+ na NADH, si otú a na -echebe ahụ gị site na ọxịdashọn.
NAD+ Mgbakwunye. Ahụ gị nwere ikike imepụta NAD+, yabụ ịchọta mgbakwunye site n'aka onye nrụpụta ama ama nke na -enye nkwa ịdị ọcha bụ ụzọ enweghị mgbu iji bulie ọkwa ndị a n'ahụ gị. Ihe mgbakwunye ndị a gụnyere nicotinamide, nicotinic acid, nicotinamide mononucleotide (NMN), na nicotinamide riboside (NR). Ot Nicotinic acid na -atụgharị na NAD+ site na usoro atọ. Na mbido mbụ, enzyme NAPRT na -atụgharị nicotinic acid ka ọ bụrụ nicotinic acid mononucleotide (NAMN). N'ọkwa nke abụọ, enzyme, NMNAT, na -atụgharị NAMN ka ọ bụrụ nicotinic acid adenine dinucleotide (NAAD). Enzyme, NAD+ synthetase (NADS) wee tụgharịa NAAD ka ọ bụrụ NAD+. NAD+ biosynthesis na ụzọ nzọpụta gụnyere ntụgharị nicotinamide na NMN site na enzyme, phosphoribosyltransferase, NMNAT. Enzyme ahụ na -atụgharị NMN ka ọ bụrụ NAD+.】
Na -eme ngwa ngwa. Ọ bụ ezie na akwadoghị mmachi kalori ma ọ bụ ogologo oge ibu ọnụ maka ọtụtụ ndị okenye, ibu ọnụ dị mkpirikpi ma ọ bụ na -agafe agafe nwere ike igosi nsonaazụ yiri ya. Ibu ọnụ na -aga n'ihu bụ ụzọ na -adigide nke iwebata ahụ gị ogologo oge na -enweghị iri nri, na -ebuli ọkwa NAD+ gị n'otu ụzọ ahụ ketosis.
Ọ bụ ihe nwute, nri nwere abụba nwere ike ọ gaghị adị mma ma ọ bụrụ na ị nwere ọrịa shuga, ọrịa obi, ma ọ bụ mụbaa cholesterol LDL. N'otu aka ahụ, ibu ọnụ nwere ike ọ gaghị abụ ihe amamihe dị na ya maka ndị nwere ọnọdụ ahụike yana ọ na -esikarị ike ịga n'ihu ka oge na -aga. N'ihi ya, ịgbakwunye ntụ ntụ NMN ma ọ bụ ndị ọzọ Ihe mgbakwunye NAD bụkarị ụzọ kachasị dị nchebe na nke kachasị adaba iji kwalite mmụba nke NAD.
Mgbe anyị matara NAD+ yana otu o si arụ ọrụ, echere m na ị ga -amatarịrị ihe kpatara anyị ji ewere ntụ ntụ NMN? Kedu ka ọ si arụ ọrụ mgbe ntụ ntụ NMN banye n'ahụ anyị. N'ụzọ dị mfe, NMN bụ ihe na -ebute ụzọ NAD+ tupu ịbanye n'ime ahụ anyị. Inweta ntụ ntụ NMN nwere ike ịbawanye ọkwa NAD+ ma nyere anyị aka iti ọsọ nke ịka nká.
Imirikiti data dị ugbu a sitere na anụmanụ, nke egosighi mmetụta ọ bụla. Nnyocha ụmụ oke ogologo oge egosighi nsị, mmetụta dị oke egwu, ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ ndị na-anwụ anwụ n'ime oge ntinye aka nke ọnwa 12. Dị ka anyị si mara, na nso nso a emere nnwale mmadụ na Japan. Ebumnuche nke ikpe ahụ bụ ikpebi ma ọ bụrụ na ntụ ntụ NMN adịghị mma. E nyere NMN ụmụ nwoke iri nwere ahụike. E nyere 10, 100, na 250 mg NMN. Otu nchịkwa ọnụ nke NMN emeghị ihe mgbaàmà ụlọ ọgwụ ọ bụla ma ọ bụ mgbanwe na ndị na -ahụ maka ihe ndị dị ndụ dị ka ọnụego obi, ọbara mgbali, saturation oxygen, na ahụ ọkụ. Ọnwụnwa na-enyere aka ikwenye na, n'ozuzu ya, ntụ ntụ NMN dị mma yana anabata ya nke ọma; iji mezuo nke ahụ, a pụrụ iwere ikpe ahụ ka ihe ịga nke ọma. Ọmụmụ ihe a tụọkwara ịdị mma nke ụra, ahụghị ọdịiche ọ bụla tupu na mgbe oriri NMN gachara.
N'ihi ọnụ ọgụgụ dị nta nke ọnwụnwa mmadụ, ndị ọkà mmụta sayensị na-aga n'ihu na-enyocha nsonaazụ nke NMN, na-agba mbọ inweta data ụlọ ọgwụ karịa ọnwụnwa mmadụ, iji hụ na ebuputara ngwaahịa ọhụrụ a nke ịka nká.
N'otu oge ahụ, anyị ga -ekwu maka Dr. David Sinclair onye bụ otu n'ime mmadụ 100 kacha nwee mmetụta n'ụwa site na Time Magazine, na -ewere ihe mgbakwunye NMN ruo ọtụtụ afọ na ndị enyi nọ na ụlọ ọrụ ịka nká. Ọ kọọrọ anyị ahụmịhe ahụ mgbe o werechara ntụ ntụ NMN ogologo oge. O kwuru, sị: “Ana m ewere gram 1 nke NMN kwa ụbọchị, yana mgbakwunye ndị ọzọ gụnyere resveratrol, metformin, na aspirin. Ahụbeghị m ihe ọ bụla ọzọ karịa iwe iwe ruo ugbu a. ” O chetakwara na anyị kwesịrị idobe ntụ ntụ NMN na ihu igwe dị mma ma ọ bụ nke ọma n'ime friji, n'ihi na NMN na -emebi Nicotinamide na -emebi ahụ gị mgbe echekwara NMN na oke ọkụ/ọkụ.
NMN (Nicotinamide Mononuleotide) bụ ihe ebumpụta ụwa nke NAD+. Mgbakwunye NMN na -ewelite DAN+ maka ahụike dị mkpa & ogologo ndụ n'etiti inye uru ahụike ndị ọzọ.NMN ntụ ntụ dị na mmalite nke ọnwụnwa mmadụ yana uru uru ugbu a sitere na ịga nke ọma n'ọmụmụ anụmanụ. Ruo taa, enweghị ihe akaebe ọ bụla nke mmetụta ọjọọ ọ bụla, ọbụlagodi na oke ọgwụ ogologo oge. Ọ gosipụtakwala uru ahụike n'ihe gbasara ụdị ọrịa shuga nke abụọ na Ọrịa Alzheimer.N'okpuru bụ 10 nke uru kacha elu nke NMN ntụ ntụ:
Effect Mmetụta mgbochi nka
♦ Na -amụba ọmụmụ ụmụ nwanyị
Na -eme ka anya na ịhụ ụzọ ka mma
♦ na -eme ka nrụzi nke eriri DNA gbajiri agbaji dị
Ọ na -eme ka arụ ọrụ akụrụ & ọbara na -erugharị
Ọ na -ebelata cholesterol na triglycerides
Na -eme ka ọrụ sistem na -adịwanye mma
Na -akwalite ahụike na arụ ọrụ nke obi
Na -emezi ọrụ mitochondrial site na ibelata neuroinflammation
Azịza ya bụ "n'ezie ọ bụghị". Maka na a na -ahụ NMN n'ụzọ nkịtị n'ọtụtụ nri, ị nwekwara ike ịchọta ha na ndụ anyị. N'okpuru bụ nri isii kachasị na NMN:
Ugbu a, ị ga na -eche: “Ọ bụrụ na achọta NMN na nri, enweghị m ike ịbawanye ọkwa NAD+ m site na iri ọtụtụ nri ndị ahụ?” Nke ahụ bụ ezigbo ajụjụ. Agbanyeghị, aga m egosi na ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe NMN ịka nká, ị ga -eri nnukwu nri nke ọ bụla n'ime nri ndị a. Ọ bụ ihe nwute, NMN n'ime obere osisi broccoli anaghị ezu iji malite ịkwalite ọkwa NMN. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, iji nweta ihe dịka 1mg nke NMN, ị ga -eri ihe dị ka 1kg broccoli! Nke a dị elu karịa ihe anyị nwere ike inweta site na nri anyị, n'agbanyeghị ole brokoli anyị na -eri. Yabụ, anyị ga-atụle maka iwere ntụ ntụ NMN dị ka mgbakwunye maka ịka nká na ndụ anyị, ọ nwere ike nyere ahụ anyị aka ịbawanye NAD+, na-alụ ọgụ ịka nká.
N'ime ajụjụ ikpeazụ, anyị kwuru maka Dr. David Sinclair onye were 1g NMN kwa ụbọchị. Mgbe ahụ 1g bụ ọgwụ kacha arụ ọrụ maka anyị iji nweta uru nke NMN, ọ dị mma? "Ọ dịghị ma ọlị!" Mgbe ị na -arụ ọrụ ego ole ị ga -ewere, ọ dị mkpa ịtụle ka esi elekọta NMN yana bioavailability ya. Kedu ihe ọzọ, ahụ dị iche iche nwere mmeghachi omume dị iche iche. Anyị kwesịrị imepụta mgbe ọ dị mma iwere NMN, otu esi ewere ya yana ole anyị kwesịrị ị were mgbe ị dị njikere iwere ntụ ntụ NMN.
Ka anyị kwuo ajụjụ mbụ: Otu esi ewere ntụ ntụ NMN?
A na-enye NMN n'ime nhọrọ anọ ga-emetụta ego NMN ga-eme n'ezie n'ime sistemụ ọbara gị: ntụ ntụ, ntụpọ sublingual, capsules ọkọlọtọ, na capsules na-eguzogide ọgwụ.
Iji ghọta bioavailability, mmadụ kwesịrị ịghọta Mmetụta Mfe Mbụ (ọ na -ezo aka na ole imeju na -emebi ma ọ bụ hazie ya tupu ọ banye na sistemụ ọbara). Nke a bụ echiche dị mgbagwoju anya, echere m na vidiyo a nwere ike inyere anyị aka ịghọta ka o si arụ ọrụ yana ihe kpatara o ji dị mkpa ka anyị mara ya tupu anyị ewere ntụ ntụ NMN. N'ihi metabolism mbufe ngafe, oriri ọnụ nke NMN adịchaghị arụ ọrụ karịa capsules sublingual ma ọ bụ eriri afọ. Mgbe ejiri ọnụ NMN were ọnụ (ma ọ bụrụ na e rie ya ma ọ bụ gwakọta ya na mmiri mmiri) ọtụtụ acid na -ebibi ya. NMN fọdụrụ ka imeju metabolized. Kedu ka imeju si metabolizes NMN nwere ike inwe nnukwu mmetụta na bioavailability. Ọ nwere ike bụrụ na naanị obere akụkụ nke NMN na -eme ya n'ezie na sistemụ gị. Ọzọkwa iji meziwanye ọkwa NAD+ gị, ịnwere ike were Sirtuin Activator were were NMN capsules na-egbu oge. Resveratrol na yogọt nwere abụba nke na-enyere bioavailability Resveratrol aka.
Mana mgbe a na -ewere NMN (ma ọ bụ ọgwụ ọ bụla ma ọ bụ mgbakwunye) n'ụzọ aghụghọ, ọ na -etinye uche na akpụkpọ ahụ mucous (n'okpuru ire) wee banye ozugbo n'ọbara. Site n'ebe ahụ ọ na -aga kpọmkwem n'ụbụrụ na akụkụ ndị ọzọ, na -agabiga "mmetụta ngafe mbụ" site na imeju. Ọ bụ maka nke a, anyị kwenyere na ị were NMN sublingual ma ọ bụ na capsule na-eguzogide ọgwụ bụ nke kachasị dị irè ma dị mma. Ọ nwere ike ịchọ obere doses karịa ị were ntụ ntụ NMN ọnụ ma ọ bụ n'ụdị capsule ọkọlọtọ.
Ajụjụ na -esote: Mgbe ọ kacha mma iji were ntụ ntụ NMN?
Ịka nká bụ ọrịa nke enwere ike ịlụ ọgụ ya na mgbakwunye kwesịrị ekwesị nke mgbakwunye na omume, dịka nyocha ọhụrụ sitere na Mahadum Waterloo. na afọ ha. Ndị na-eto eto kwesịrị iwere ụfọdụ ihe mgbochi ịka nká n'abalị, ebe ndị okenye kwesịrị iwere ya n'etiti ehihie ka ha wee nwee ike rụọ ọrụ nke ọma. na -emetụta ahụ gị, otu i si eto na etu i si ebi ndụ, ”onye nchọpụta Layton kwuru. “Ndị mmadụ kwesịrị icheta mgbe ha na -eri nri ma hụ na ọ dabara na ihe ndị ọzọ na gburugburu ha na -emetụta okirikiri ụra/edemede ma ọ bụ elekere ahụ ha.
Yabụ, mgbe ọ kacha mma iji were ntụ ntụ NMN? afọ bụ isi ihe tupu ị kpebie ego ole anyị ga -ewere ntụ ntụ NMN. Dịka ọmụmaatụ, a mụrụ ya na mgbakwunye NMN kacha baa uru maka ndị na -eto eto were awa isii mgbe ha tetara. N'ụzọ dị iche, ọmụmụ na -egosi na mgbakwunye Resveratrol na -arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na ndị na -eto eto ewere ha n'ehihie. Maka ndị okenye, ọ dị mkpa ị supplementsụ ihe mgbakwunye ndị a n'ehihie.
Ajụjụ ikpeazụ: Ego ole ka anyị kwesịrị iwere ntụ ntụ NMN?
Mgbe anyị gụchara ajụjụ ndị a dị n'elu, anyị ga -amatarịrị na onye ọ bụla ga -achọta usoro onunu ogwu maka ntụ ntụ NMN, ọ bụghị ọgwụ a kapịrị ọnụ dị ka nkwanye. Mgbe ahụ, kedu ka anyị ga -esi gbakọọ usoro NMN maka onwe anyị? Dị ka ọmụmụ ọhụrụ, ọ na -emetụta oke ibu anyị. Site n'ọmụmụ ihe ahụ: “Nyere na 100 mg/kg/ụbọchị nke NMN nwere ike belata mbelata nke ihe ọmụmụ metụtara afọ na ụmụ oke, nha nha nha maka ụmụ mmadụ ga-abụ ~ 8 mg/kg/ụbọchị, na-enye olileanya ịtụgharị asụsụ anyị. nsonaazụ nye mmadụ. ” Dị ka ndị dere nyocha nyocha emere n'oge na -adịbeghị anya si dị, ga -ewe obere 8 mg nke NMN kwa kilogram nke ịdị arọ ahụ kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ọmụmụ ihe ahụ ziri ezi, mgbe ahụ ka ịchọta NMN ole ịchọrọ na opekempe, ị ga -ebu ụzọ chọta ịdị arọ gị na kilogram, wee mụbaa site na 8. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịdị arọ gị bụ 50kg, usoro onunu a tụrụ aro bụ ihe dị ka 400mg.
Ọ bụrụ na ị were mgbakwunye dị elu nwere ezigbo bioavailability, dị ka AASraw NMN ntụ ntụ, mgbe ahụ anyị na -akwado usoro onunu ogwu ndị a dabere na nzaghachi ndị ahịa:
Arọ Ọnụọgụ ọgwụ maka ntụnyere (kwa ụbọchị)
Ụdị usoro ọgwụgwọ a bụ naanị dị ka nkwụghachi. Ego ole ka ị ga -ewere? Ọ dịzịrị gị. Mana ọ bụrụ n'ịchọpụta na ọmụmụ ihe a na -eme ka obi sie gị ike, ị nwere ike ịmalite ịgbakọ ya na 8 mg kwa kilogram nke ịdị arọ ahụ kwa ụbọchị.
Ọ bụrụ na ị bụ ezigbo onye na-ekiri ya, ị ga-ahụrịrị na Dr. David Sinclair na-ewere ihe mgbochi ịka nká kwa ụbọchị, ọ bụghị naanị ntụ ntụ NMN, nweekwa ndị ọzọ, dị ka resveratrol, metformin, na aspirin… na NMN ntụ ntụ ọnụ? Maka gịnị?
Dabere n'ọmụmụ ihe sitere n'aka Dr. David Sinclair na ndị otu ya, na-ewere NMN ntụ ntụ ihe mgbakwunye ndị ọzọ bara ezigbo uru maka mgbochi ịka nká. Maka ugbu a, m ga -ekekọrịta mgbakwunye 3 mgbe anyị were ntụ ntụ NMN. Ihe mgbakwunye 2 bụ resveratrol na pterostilbene. Resveratrol bụ stilbenoid dị na akpụkpọ mkpụrụ vaịn na obere ego. Nnyocha egosila na resveratrol nwere ike belata ohere nke ọrịa obi, kansa na neurodegeneration.David Sinclair kwenyere na resveratrol na -arụ ọrụ synergistically na NMN. Achọrọ resveratrol iji mee ka mkpụrụ ndụ sirtuin rụọ ọrụ (nke na -echebe DNA na epigenome anyị), ebe NMN dị mkpa iji kpoo sirtuins. Agbanyeghị, resveratrol siri ike ka eriri afọ wee banye ya, obere resveratrol nke na -agwụ n'ime ahụ gbajiri. Ya mere, pterostilbene bụ nhọrọ ka mma. Pterostilbene bụ molekul nke yiri nnọọ resveratrol, mana ọ na -amịkọrọ ya nke ọma ma kwụsie ike na ahụ mmadụ.
Ihe mgbakwunye ọzọ bụ trimethylglycine (TMG), mgbe anyị were ntụ ntụ NMN ogologo oge, NMN na -agbada otu methyl n'ime ahụ anyị, dị ka akpachapụ anya, a na -eche na ọ dị mkpa iwere TMG (amino acid a maara dị ka betaine) iji nye otu methyl. Mgbe agbanwere NMN ka ọ bụrụ NAD+, a na -emepụta nicotinamide (NAM). Ọkwa dị elu nke nicotinamide adịghị mma maka ahụ anyị yana ka ahụ anyị wee wepụ nicotinamide ọ kwesịrị ka a methylated n'ime N-methyl nicotinamide nke na-anyụpụ na mmamịrị anyị. Iji methylate NAM, ahụ na -esite n'usoro anyị na -esetịpụ iche iche methyl. Ozizi a bụ na ka ị na -ewere NMN, a na -achọkwu ìgwè methyl iji kpochapụ NAM.
Na pọdkastị dị n'okpuru ya na Dr. Mercola, Dr. David Sinclair kwuru na ọ na -ewere TMG ka ọ bụrụ ihe mgbochi iji gbochie nke a ime, anyị nwere ike mụta ozi ndị ọzọ na vidiyo a nke Dr. David Sinclair:
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ihe mgbakwunye na -ekwu na ọ dị mma ma baakwa uru n'ahụ anyị, ọ kacha mma mgbe niile ị gakwuru onye na -ahụ maka ahụike gị tupu ịmalite iwere ya, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwere ọnọdụ ahụike yana ị na -eji ọgwụ na -adịghị ala ala. Na -agbaso usoro onunu ogwu a tụrụ aro.
Nzaghachi mbụ nke ahụ maka ihe iyi egwu na-efe efe dị ka COVID-19, nke a maara dị ka ịgbalite mgbochi ọrịa ebumpụta ụwa, dabere na NAD+. Ọrịa nje na -agbada NAD+ n'ihi na ọrịa na -ebute usoro nchekwa ekwentị nke na -ebute mmụba NAD+ iji gbochie nje ahụ weghara sel. Egosipụtala nlebara anya NAD+ nke ukwuu na COVID-19 na ụfọdụ ndị nyocha chere na nke a bụ isi ihe kpatara nje a ji egbu egbu, ọkachasị ndị nwere nchekwa NAD+ mebiri emebi. Dọkịnta Zhavoronkov tụrụ aro na inwale rapamycin dị obere n'otu n'otu ma ọ bụ yana metformin, yana ndị na-akwalite NAD+ dị ka nicotinamide riboside (NR), ma ọ bụ nicotinamide mononucleotide (NMN) nwere ike inye aka chebe ndị agadi site na ọrịa gerolavic taa yana nwekwara ike ịkwalite mgbake akụ na ụba mgbe ọrịa zuru ụwa ọnụ kwụsịrị.
Na mgbakwunye, ọmụmụ egosila na NAD+ nwere ike ịkpalite mmeghachi omume nke sistem ji alụso ọrịa ọgụ iji chebe ahụ pụọ na coronavirus dị ka COVID-19. Nnyocha e bipụtara na Machị 23, 2020 nke Mahadum Isfahan nke Sciences Ahụike na-enye ihe akaebe na enwere ike jikọta ọkwa NAD+ dị ala na ogo ọrịa na ọrịa ọrịa COVID-19. Dabere na nnwale ụlọ ọgwụ, mgbakwunye NMN na -akwalite NAD+ na ọkwa ntorobịa. Ime ka mkpụrụ ndụ NAD+ dị na mkpụrụ ndụ ihe nketa SIRT1 na -akwalite ikike ha ichebe ahụ megide ọrịa na mbibi. Ka a na -emekwu ọmụmụ ihe, ndị nyocha na -achọpụta na NAD+ nwekwara ọrụ dị mkpa ọ ga -arụ n'ịhazi usoro ahụ anyị ji alụso ọrịa ọgụ.
Ha achọpụtala na macrophages (ụdị mkpụrụ ndụ ọbara ọcha nke na -eri ndị mwakpo dịka nje, fungi, nje na nje) na -eji ụzọ NAD+ haziri iji hụ na ndụ cell na ịchịkwa mbufụt. Na mkpokọta, ọmụmụ na -egosi na NMN na ọkwa NAD+ na -abawanye nwere ike rụọ ọrụ dị mkpa n'inyere ahụ anyị aka ịlụso ọrịa na nje ọgụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ nwere ike ịkwalite sistem anyị ji alụso ọrịa ọgụ ma nyere ha aka n'oge ọrịa na ọrịa.
E bipụtara ọmụmụ ikpe na Eprel 22, 2020 site n'aka Dr. Robert Huizenga MD na Mahadum Chicago na-akọwa nzaghachi ya na nwanyị dị afọ 55 nke ejiri COVID-19 n'ụlọ ọgwụ na Machị 16. Ọnọdụ ya nọgidere na-aka njọ na ụbọchị. 13 o nwere oyi oyi doro anya, oke ikuku cytokine na hsCRP dị elu nke ukwuu, akara mkpali na-abụghị nke akọwapụtara. Dọkịta Huizenga ji NMN, betaine na NaCl (nke amaara ibelata IL-6) wee gwọọ ya wee gaa n'ihu ọgwụgwọ zinc nke enyerela ya tupu. Ka ọ na -erule ụbọchị 15, a belatara ahụ ọkụ ya na mgbaàmà ya ka mma. Ka ọ na -erule ụbọchị 17 a tọhapụrụ ya ịla n'ụlọ. Ka ọ na -erule ụbọchị 23, ọ bụ asymptomatic. A na -agwọ ndị ọrịa abụọ ọzọ merela agadi otu "mmanya" ma ha abụọ nwere ụdị mgbake ahụ.
Nicotinamide mononucleotide (NMN) na nicotinamide riboside (NR) bụ ihe na -ebute ụzọ biosynthetic na molekul dị mkpa maka metabolism - nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+). Akụkụ molekụla nke NMN na NR bụ otu ihe, ewezuga na NMN nwere otu mgbakwunye phosphate. Otu phosphate agbakwunyere a na -eme NMN ka ọ bụrụ molekul buru ibu karịa NR. NR (nicotinamide riboside) na NMN (nicotinamide mononucleotide) na -abụkarị ihe abụọ dị ka ihe mgbakwunye na -ekwe nkwa iji belata ịka nká. Ọkwa NAD+ dị elu na -echebe epigenome na DNA anyị. Mmụba ọkwa NAD+ na -eduga n'ọtụtụ uru ahụike na akụkụ dị iche iche, dịka ụbụrụ, sistem obi na akwara.
Nyere na NR na NMN na -abawanye ọkwa NAD+, a na -akpọkarị ha ndị nkwalite NAD. Ọtụtụ ọmụmụ na-egosi na NR na NMN nwere ike melite akara ngosi ịka nká dị iche iche, dị ka epigenome dysregulated, mmebi DNA, nchịkọta protein, mbufụt (mbufụt metụtara ịka nká) na usoro ịka nká ndị ọzọ.
Mana nnukwu ajụjụ n'ezie bụ: kedu nke ka mma, ntụ ntụ NMN ma ọ bụ ntụ ntụ NR?
Ugbu a, enweghị ọmụmụ na-atụnyere NMN na NR isi maka mmetụta ahụike yana mmetụta ndụ. Ka anyị tulee NMN na NR:
Ekwenyere m na ị hụla ọtụtụ ndị na -eweta ngwaahịa mgbe ị tinyere “NMN ntụ ntụ” na Google, ka ị ghara ịma nke kacha mma ma ọ bụ dabara maka onwe gị. Anyị kwesịrị ịchọpụta ihe anyị kwesịrị ịlele mgbe anyị na onye na -eweta ntụ ntụ NMN na -akparịta ụka. Maka ịrụ ọrụ nsogbu a, mụ na ọtụtụ ndị na -eweta ntụ ntụ NMN ekwuola okwu wee depụta ndepụta maka ntụnye aka:
1） Nchọpụta Mbụ
Ịkwesịrị ịlele webụsaịtị ha ma ọ bụ ụlọ ahịa ha n'ịntanetị, gbaa mbọ hụ na ha bụ ndị na -eweta ntụkwasị obi, ọ bụghị aghụghọ. Gaa na websaịtị ha ma ọ bụ ụlọ ahịa, soro ha kwurịta okwu, jụọ ajụjụ ihe ọ bụla ịchọrọ. mgbe ha zara ajụjụ gị, ị nwere ike iche ma ọ bụ ntụkwasị obi, dịka anyị niile siri mara, ezi obi bụ ntọala nke imekọ ihe ọnụ niile. Mgbe ị na -ajụ ajụjụ ha, ị nwere ike ikwu maka akụkụ ndị a: NMM imepụta ntụ ntụ, akwụkwọ ntụ ntụ NMN, ikike ọkọnọ nke NMN ntụ ntụ….
NMN ntụ ntụ kacha mma ga -enwe ịdị ọcha 99% ma ọ bụ karịa. Ọ gaghị enwekwa ihe nzacha ma ọ bụ ihe nrụpụta ọ bụla dị ka GMO, mmiri ara ehi, akwa, soy, gluten, kemịkalụ, ọla dị arọ, ma ọ bụ ihe mgbaze ejiri mee nhazi ngwaahịa a. Ọtụtụ ntụ ntụ NMN adịgboroja na -eji ihe nzacha ma ọ bụ ihe na -akpali akpali mejupụta nnukwu ngwaahịa ahụ. Nke a nwere ike tinye ahụike gị n'ihe egwu dị egwu n'ihi na ị maghị ihe ị na -ewere. Ọ bụrụ na ịzụrụ NMN gị n'aka ụlọ ọrụ na -ere naanị capsules NMN, ọ nwere ike ịbụ ihe ọ bụla.
(3)Akwụkwọ ndị metụtara ya - Akụkọ nnwale
Dị ka ụlọ ọrụ NMN ntụ ntụ, akwụkwọ ndị metụtara ya (COA, HPLC, HNMR, MS) ga-apụta mgbe ha rụpụtara ngwaahịa ogbe, ha kwesịrị ịlele ịdị mma ya, ziga ya na ụlọ nyocha 3rd ka ọ nwalee (nke a gụnyere ịdị ọcha, mmetọ, na ọla dị arọ) Ị nwere ike lelee webụsaịtị soplaya maka ozi nnwale ndị ọzọ, ma ọ bụ kpọtụrụ ndị ahịa ha ozugbo. Nnwale nnwale ndị ọzọ bụ ụzọ dị mfe iji hụ na ị na-azụ site na isi mmalite. Ụlọ ọrụ ọ bụla na-eji nnwale ndị ọzọ kwesịrị inwe obi ụtọ ịkọrọ gị ozi ahụ.
(4)Tulee ọnụ ahịa n'etiti ọtụtụ ndị na -ebubata ya
Ọnụahịa NMN bụ metrik ọzọ ị nwere ike iji tụọ ịdị mma onye na -ebubata ngwaahịa, site na ịlele ọtụtụ ndị na -eweta NMN maka ntụ ntụ na capsules ị ga -enweta echiche nke ọnụ ahịa otu gram. kpachara anya maka uzuzu NMN adịgboroja, ma ọ bụ ngwaahịa dị ala. Ọ na -anwa ọnwụnwa mgbe niile ịchọrọ ịchekwa ego ohere ọ bụla ị nwere ike, mana na NMN akọwapụtara, ị na -enweta ihe ị kwụrụ. NMN dị ọnụ ala nwere ike bụrụ ọkwa nri, ọ bụghị ọkwa ọgwụ, nke pụtara uru NMN abụghị otu. N'ezie, enwere oge na-erughị 10% NMN na NMN nri. Iji nwalee nke a, anyị nwere ọkwa nri NMN sample nwalere ma ọ bịa na 8% NMN. Ịtụle mmefu ego gị dị mkpa, mana ị nwere ike mechaa kwụọ ụgwọ karịa n'ikpeazụ mgbe ị na-ahọrọ ngwaahịa NMN dị ọnụ ala ma ọ bụrụ na ịhụghị uru ahụike ọ bụla n'aka ha.
(5)Ezigbo ọrụ ahịa
NMN dị mma na -esite n'aka ndị na -eweta ngwaahịa dị mma, onye na -ebubata ya kwesịrị ntụkwasị obi kwesịrị inwe ezigbo ọrụ ndị ahịa. Mgbe gị na onye na -enye nkọwa na -ekwu okwu, ziga ha ajụjụ niile, ha ga -azakwa gị n'oge adịghị anya. Gbakwunyere, mee ka ị mara usoro ịzụrụ ihe niile, otu esi eme ya ma mee ka ị mara ihe ị ga -eme maka nzọụkwụ ọzọ, usoro niile kwesịrị nyochaa onwe gị. Biko cheta na ezigbo ọrụ ndị ahịa bụ onye na -enwe ahụ iru ala na -akparịta ụka n'oge ọ bụla.
(6)Nyocha sitere n'aka ndị ahịa ndị ọzọ
N'ozuzu, anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ nyocha gbasara ụlọ ọrụ ahụ ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ enyela ntụ ntụ NMN ogologo oge, ma ọ bụ ha nwere ike ịnye ụfọdụ nzaghachi n'aka ndị ahịa ndị ọzọ. E kwuwerị, anyị nwere ike ịmara na ọ bụ eziokwu ma ọ bụrụhaala na ha nwere ndekọ ire ere na ezigbo nzaghachi nke ndị ahịa. N'ezie, anyị ga -amatarịrị na nyocha sitere na ndị ahịa ndị ọzọ naanị dịka ntụaka mgbe anyị kpebiri ịzụta ntụ ntụ NMN, ọ dabere na gị n'ikpeazụ.
AASraw bụ ụlọ ọrụ nwere ụlọ ọrụ asambodo, nwere ike mepụta ntụ ntụ NMN na mgbakwunye mgbochi ịka nká, ọkọnọ a kwụsiri ike. Ị na-aga na webụsaịtị ha-www.aasraw.com n'oge ọ bụla wee jụọ ọrụ ndị ahịa ha, jụọ asambodo ogo na mkpesa nnwale na 3.rd-lab, gosi na ntụ ntụ NMN ha bụ ọkwa ọgwụ ọgwụ 99% dị ọcha yana ọ bụ nke mbụ. Dị ka m maara, ha nwere ike izipu ngwaahịa nke ị nyere n'iwu n'ime ụbọchị ọrụ 1-3, ọbụlagodi awa iri na abụọ ka enyere iwu, arụmọrụ ọrụ dị elu nke ukwuu, aghaghị m inye ha mkpịsị aka ukwu maka nke ahụ. Ị ga -enweta foto ntụ ntụ NMN na nọmba nsuso ha ka ịtụchara, mgbe ahụ ị nwere ike iji soro ngwugwu ahụ na ntanetị ma mara ebe ọ dị, lee anya na ụlọ gị. Mụtakwuo maka AASraw ugbu a
Nicotinamide riboside (NR) na nicotinamide mononucleotide (NMN), ka egosiri na ọ na-eme ka ọrịa na-emetụta afọ dị n'ime anụmanụ. A na-anabata ha nke ọma n'ọtụtụ dị elu ma bulie ọkwa NAD+ nke ọma. Mkpụrụ ndụ ndị a anaghị akwụsi ike na oke okpomọkụ ma ọ bụ n'ọnọdụ oke iru mmiri, agbanyeghị. Ha na -agbada ngwa ngwa n'ime nicotinamide, nke na -egbochi ọrụ sirtuins na PARP, enzyme mmezi DNA. Maka nsonaazụ kacha mma, ekwesịrị idobe ntụ ntụ NMN n'ime akpa ha na ebe ọ bụla na -esi enweta mmiri. NMN ntụ ntụ anaghị eri nri maka ọnwa 3 ma ọ bụ karịa nwere ike friji iji hụ na ha nwere ike zuru oke. Dị ka onye ndu ụwa niile, AASraw na -enye NAD+ na NMN ntụ ntụ kacha dị oke mma mgbe niile.
Tom si UK: Mụ na nwunye m bidoro iwere ntụ ntụ NMN ọtụtụ ọnwa gara aga, ọ tụrụ anyị n'anya na m kwụsịrị isi ike na nsogbu akpụkpọ ahụ nwunye m malitere ibelata! Anyị na -enwe mmetụta nke ido anya ka mma na -enwekwa ike karịa, enwetụbeghị m mgbakwunye nke m nwere mmeghachi omume pụtara na m na -ekwu na ị na -ewere ọtụtụ vitamin na mgbakwunye ahịhịa mana ọ naghị enwe mmetụta n'ezie na nsonaazụ ya! Nke a bụ ihe mgbakwunye dị ịtụnanya mmadụ ụdị achọpụtala na ọ ga -ekwe omume iweghachi ọtụtụ nde mkpụrụ ndụ n'ime ahụ mmadụ bụ nchọpụta dị ịtụnanya maka usoro ịka nká! Echere m na onye ọ bụla ga -amata ọgwụ a n'ọdịnihu dị nso na nyocha ọrịa kansa ga -achọpụtakwa, anyị nọ n'ime afọ 50 ma anyị enweghị ike ikwu nke ọma gbasara ụdị mmetụta anyị nwere! Kedu onye na-agaghị achọ inwe ahụike ka ọ na-agbakwunye nke a na mgbakwunye nri ịka nká ga-agbanwe ndụ gị maka ịtụkwasị m obi nke ọma !!!
liMei si China: Ahọrọ m ntụ ntụ NMN n'ihi na agụrụ m na ọ na -enyere oxygen aka n'ọbara ma na -ebunye oxygen na anụ ahụ m. Ahụ m na -akpọ maka ngwaahịa a, enwere m ike ọgwụgwụ na enweghị m ike itinye uche. Aburula m na -ewere ntụ ntụ NMN ruo izu abụọ ugbu a. Ahụla m ka ume na -abawanye, enwere m ike isonye na mmemme mmega ahụ kpụ ọkụ n'ọnụ mgbe m rụsịrị ọrụ ụbọchị niile. Echiche m doro anya, anaghị m enwe isi ụra na nzukọ. Enwere m obi anụrị na mgbakwunye NMN m na -enweta nsonaazụ m na -achọ. Na mgbakwunye, aghaghi m ịsị: Ọnụ ego NMN dị ntakịrị elu mana achọrọ m isi ọnwụ na m ga -ewere ya, n'ihi na achọrọ m ịbụ nwata, haha…
Gary si Australia: Nke a bụ nnukwu ihe mgbochi ịka nká. Achọpụtara m na ume na -abawanye, enwetaghị m oyi nke 4 afọ m, anaghịkwa m ada mbà ngwa ngwa. Ụdị ume m na -eche dị iche na caffeine dị elu. Anaghị m echegbu onwe m ma ọ bụ nwee mkpali karịrị akarị, na-adị njikere n'ezie. N'agbanyeghị na m mụ anya, ụra m akala mma. Enwetụbeghị m nsogbu ihi ụra, mana enwere m ike iteta n'ụra n'abalị. Site na ntụ ntụ NMN, m na -ehi ụra ogologo ogologo. Echere m na NMN na -abara m uru n'ọtụtụ ụzọ na enweghị m ike ikwu okwu nke ọma gbasara ya.
Steven si USA: Mgbe m mụtara gbasara ntụ ntụ NMN yana nsonaazụ ọ ga -ekwe omume site n'ọmụmụ Harvard nke Dr. David Sinclair mere, ekpebiri m ịnwale ya. Site n'ụbọchị mbụ m nwara ya, achọpụtara m ihe dị iche n'ogo ike m. Adị m afọ 57, ọ na -adịkwa ka metabolism m na -agbanwe ka ọ ka mma. Agbanwebeghị m usoro nri m, mana m na -agbada, 14 lbs n'ime izu anọ. Ogologo oge ahụ na -egosi mfu na -adịgide adịgide. Nwunye m efunahụla kilogram 4, ọ na -arịakwa ọrịa na -adịghị ahụkebe akpọrọ Erythromelalgia, nke na -eme ka akụkụ ahụ nwee oke ọkụ na mgbu neuropathic, ọ na -agbanwe agbanwe. Akụkụ Niacin nke ogige ahụ, na mgbakwunye na ọgwụ ya, emeela ka ihe mgbu belata ntakịrị, ma mee ka arụ ọrụ dịkwuo ukwuu. Mgbe m gbapụrụ na nke mbụ - anwara m nke ahụ n'aka ndị na -eweta ntụ ntụ NMN ọzọ. Ngwakọta ya dị iche, ike agbasasịkwa. Ọ bụ ya mere m ji laghachi MAAC9, ugbu a alaghachila m azụ. Ị mara, ọbụlagodi na ụfọdụ n'ime isi awọ m juru ebe niile gbara ọchịchịrị na -enweghị agba. Ọ na-arụ ọrụ Ị mara-echeghị m na m na-elekwa anya 10 ọzọ, agbanyeghị, daalụ maka mgbakwunye ọrụ ebube a-NMN ntụ ntụ ma kelee maka aasraw.
Ọ bụ ezie na Isi Iyi nke Ntorobịa ka bụ akụkọ ifo dị egwu nke na-agaghị emezu n'oge na-adịghị anya, sayensị na-akwado ọgwụ ịka nká na-aga n'ihu n'ihu. Ikekwe otu ụbọchị, ị ga -enwe ike ị pụ ọgwụ ọrụ ebube wee hụ ndụ ọzọ dịka onye ntorobịa ọzọ. Nnyocha ụmụ anụmanụ gosipụtara ihe NMN na-ekwe nkwa na NAD+-boosting na mgbochi ịka nká. Ugbu a, ọ bụ ezie na ndị nyocha ahụ na -aga n'ihu na nnwale ụlọ ọgwụ iji nyochaa nchekwa na ịdị irè nke molekul ahụ na mmadụ. Ihe mgbakwunye NAD na NMN na -enye ezigbo uru iji belata oke mmetụta nke ịka nká na ahụ mmadụ. Ekwenyere m na ọ ga -enye aka ma ọ bụrụhaala na ha na -aba uru maka ahụ anyị, Ka anyị gbakọta ọnụ ọzọ.
 North, BJ, Rosenberg, MA, Jeganathan, KB, Hafner, AV, Michan, S., Dai, J.,… & van Deursen, JM (2014). SIRT2 na -adọta kinase BubR1 iji mee ka ndụ dịkwuo ogologo. Akwụkwọ akụkọ EMBO, e201386907.
 Kiss, T., Nyúl-Tóth, Á., Balasubramanian, P., Tarantini, S., Ahire, C., Yabluchanskiy, A.,… & Ungvari, Z. (2020). Mgbakwunye Nicotinamide mononucleotide (NMN) na-akwalite mmegharị neurovascular na ụmụ oke ochie: akara ukwu nke ntinye SIRT1, nchedo mitochondrial, mgbochi mkpali, na mmetụta mgbochi apoptotic. GeroScience, 1-20.
 Grozio, A., Mills, KF, Yoshino, J., Bruzzone, S., Sociali, G., Tokizane, K.,… & Imai, SI (2019). Slc12a8 bụ nicotinamide mononucleotide na -ebugharị. Metabolism nke okike, 1 (1), 47-57.
 Li, J., Bonkowski, MS, Moniot, S., Zhang, D., Hubbard, BP, Ling, AJ,… & Sinclair, DA (2017). Akpa nchekwa NAD+ echekwara nke na-ahazi mmekọrịta protein na protein n'oge ịka nká. Sayensị, 355 (6331), 1312-1317.
 Stipp D. Beyond Resveratrol: NAD Fad na-emegide ịka nká. Netwọk blọgụ American Scientific. Machị 11, 2015.
 Tarragó MG, Chini CC, Kanamori KS, Warner GM, Caride A, de Oliveira GC. + Jụọnụ. Metabolism nke sel. Mee 2018, 27 (5): 1081–1095.e10. PMC 5935140. PMID 29719225. doi: 10.1016/j.cmet.2018.03.016.
 Bogan KL, Brenner C. Nicotinic acid, nicotinamide, na nicotinamide riboside: nyocha molekụla nke NAD+ vitamin preursor na nri mmadụ. Nyocha kwa afọ nke nri. 2008, 28: 115–30. PMID 18429699.
 Fletcher RS, Lavery GG (Ọktoba 2018). "Mmalite nke nicotinamide riboside kinases na nhazi nke metabolism NAD+". Akwụkwọ nke Molecular Endocrinology. 61 (3): R107 – R121. ma ọ bụ: 10.1530/JME-18-0085. PMC 6145238. PMID 30307159.
Otu esi eme ka testosterone enanthate homebrew na nzọụkwụ 6
Nootropic Coluracetam: Otu esi arụ ọrụ na Brain ma na-emeso nchegbu